Omeo ny tomponao indrindra - Church of God of Switzerland Switzerland
lahatsoratra > Miresaka momba ny fiainana > Omeo ny ratsy indrindra ho an'ny tompony
Mety ho fantatrao ny fihirana taloha izay manomboka amin'ny teny hoe "Manomeza tsara indrindra amin'ny Tomponao, tsy misy zavatra hafa mendrika ny fitiavany." Fahatsiarovana mahafinaritra sy manan-danja izany. Mendrika ny tsara indrindra avy amin'Andriamanitra isika mba ho afaka hanome azy. Saingy rehefa mieritreritra izany isika dia tsy ny tsara indrindra ihany no tadiavin'ny Andriamanitra - mangataka antsika koa izy hanome azy ny ratsy indrindra nataontsika.
In 1. Petrus 5,7 hoy izahay: apetraho aminy ny fanahianareo rehetra; satria miahy anao izy. Fantatr’i Jesosy fa tsy tsara tarehy foana isika. Na dia efa Kristianina nandritra ny taona maro aza isika, dia mbola manana fanahiana sy olana. Mbola manao fahadisoana ihany isika. Mbola manota ihany isika. Na dia mihira toy ny hoe Ataovy izay tsara indrindra vitanao ho an'ny Mpitarika aza isika dia manolotra ny ratsy indrindra ho an'Andriamanitra.
Afaka mifankahazo amin’ny tenin’ny apostoly Paoly ao amin’ny Romanina toko faha-7 isika rehetra: Satria fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato anatiko, izany hoe ato amin’ny nofoko. Te hanao izany aho, nefa tsy afaka manao ny tsara. Satria tsy manao izay tsara izay tiako aho; fa ny ratsy tsy tiako no ataoko. Fa raha izay tsy sitrako no ataoko, dia tsy izaho no manao izany, fa ny ota izay mitoetra ato anatiko (Rom. 7,18- iray).
Isika rehetra dia samy te hanao izay tsara indrindra vitantsika ho an'Andriamanitra, fa amin'ny farany dia manome an'Andriamanitra ny ratsy indrindra. Ary izay ihany no tanjona. Fantatr’Andriamanitra ny fahotantsika sy ny fahadisoantsika, ary efa navelany ny zavatra rehetra tao amin’i Jesosy Kristy. Tiany ho fantatsika fa tia antsika sy mikarakara antsika izy. Hoy Jesosy amintsika: Mankanesa atỳ amiko, ianareo rehetra izay mavesatra entana sy mavesatra entana; Te-hamelombelona anareo aho (Matio 11,28). Atolory an'Andriamanitra ny ahiahinao - tsy mila izany ianao. Atolory an’Andriamanitra ny tahotrao. Atolory azy ny tahotrao, ny fahatezeranao, ny fankahalanao, ny fangidianao, ny fahadisoam-panantenanao, na dia ny fahotanao aza. Tsy mila mitondra ny enta-mavesatr’ireo zavatra ireo isika, ary tsy tian’Andriamanitra hotazonina. Tsy maintsy manolotra azy ireo amin’Andriamanitra isika satria te hanaisotra azy ireo amintsika Izy, ary Izy irery ihany no afaka mandroaka azy ireny araka ny tokony ho izy. Atolory an’Andriamanitra ny fahazaran-dratsy rehetra. Omeo azy ny alahelonao rehetra, ny eritreritsika maloto rehetra, ny fitondrantenanao mampiankin-doha rehetra. Atolory azy ny fahotanao rehetra sy ny helokao rehetra.
Nahoana? Satria Andriamanitra efa nanonitra izany. Anjarany izany, ary ankoatra izany, dia tsy tsara raha mitandrina azy isika. Koa tsy maintsy avelantsika hialana amin'ny ratsy indrindra isika rehetra ary hatolotra an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Apetraho amin'Andriamanitra ny helokao rehetra, ny zavatra ratsy rehetra izay, tsy tokony halehantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tiany ianao ary te handray izany amin'ny tananao izy. Avelao izy hanana ny zavatra rehetra.
Tsy hanenenanao izany.